Wafdi ballaaran oo ka socda dalka Finland oo maanta soo gaaray Muqdisho - Halbeeg News
Wafdi ballaaran oo ka socda dalka Finland oo maanta soo gaaray Muqdisho
Wasiirka ganacsiga dowdladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye (Bidix Dhexe) iyo Wafdi ka socda Finland oo ku kulmay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho 19-ka Janaayo 2019
MUQDISHO(HALBEEG)- Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray ergo iyo masuuliyiin ka kala socota 25 shirkadood oo laga leeyahay dalka Finland.
Wafdigaan oo u badnaa kuwo u dhashay dalka Finland ayaa waxaa si diirran u soo dhaweeyay wasiirka wasaraadda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo masuuliyiin kale.
Ujeeddada Socdaalka ay wafdigan ku yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in ay ka qeybgali doonaan shir ay si wadajir ah usoo agaasimeen dowladaha Soomaaliya iyo Finland kaasoo looga hadli doono arrimaha ganacsiga iyo maalgashi dhex mara labada dal.
Dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaallo ay ku soo jiidaneyso indhaha maalgashiga caalamiga ah si uu dalku uga soo kabsado colaaddii colaadihii muddada dheer ragaadisay dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka.
Dhawaan ayay ahayd markii sharikadda Maersk line oo ah sharikad dunida u kala daabusha konteenarrada ganacasiga ay ka howl bilowday Soomaaliya.
Sanadihii u dambeeyay waxaa soo xoogeysanayay xariirka dowladda Soomaaliya ay la yeelanayso dowladaha iyo shirkadaha daneynaya inay ka qeyb qaataan maalgashiga iyo ganacsiga dalka.
Nin ajinnabi ah oo amni darro looga shakiyay oo lagu qabtay garoonka Aadan Cadde
Masuuliyiinta wasaaradda Waxbarashada oo qaabilay ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaanka dowladda